I-EyeTrackShop: UkuKhangelwa kwamehlo ngeWebhu yeWebhu | Martech Zone
NgoLwesibini, Meyi 10, 2011 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Olu luphuculo olukhulu kwishishini lokulandela umkhondo wamehlo. Kudala ukuba xa ufuna ukulandelwa kwamehlo kufezekisiwe, ubudla ngokuhlawula imali engathandekiyo kwezi arhente zinezixhobo kunye nabasebenzi ukufezekisa iprojekthi.
Yintoni ukuKhangelwa kwamehlo?
Itekhnoloji yokulandelela iliso ilinganisa ngqo apho bajongeka khona abathengi bakho. Oku kwenza ukuba ubone kwangoko ukuba unxibelelwano lwakho luyasebenza okanye hayi. Kwixesha elidlulileyo kuye kwafuneka uthembele koqikelelo olufundileyo okanye kwizifundo zelebhu ezihambele phambili ezithathe ixesha elide, kodwa ngoku senze ukulandelwa kwamehlo kufumaneke ngendlela entsha ngokupheleleyo, elula, ekhawulezayo nenendleko. EyeTrackShop
Iziphumo ze-EyeTrackShop zinikezelwe kwiingxelo ezisemgangathweni, kubandakanya ixesha elithathe umbukeli ukulungisa into, bahlala ixesha elingakanani kwinto leyo, kunye nemephu eshushu ngokubanzi apho bajolise khona. Ukulandelwa kwamehlo yitekhnoloji eluncedo yokwandisa iphepha lokufika kunye nentengiso-ukuqinisekisa ukuba ujoliso lombukeli lubekwe kanye kule ndawo ufuna ukuba ibe kuyo. Akufumaneki kuvavanyo lwemihla ngemihla, nangona kunjalo, ngenxa yeendleko ezichaphazelekayo.
Kukho izibonelelo ezithile koku zombini iarhente kunye nabathengisi:
Itekhnoloji yokujonga iliso ye-EyeTrackShop ekhethekileyo yewebhu yewebhu ikuvumela ukuba wenze isifundo kwiimarike ezininzi ngaxeshanye.
I-EyeTrackShop inokuvavanya ngokuchasene neepaneli ezinkulu ezingenamda.
Uvavanyo lwe-EyeTrackShop lwenziwa ekhaya, iziphumo ziyahambelana nokusetyenziswa kwendalo.
I-EyeTrackShop inokufumana iziphumo kwiintsuku nje ezimbalwa.
I-EyeTrackShop iyabiza iindleko-inqanaba leendleko ezikunceda ukwandisa i-ROI yakho, nokuba kukwiprojekthi ezincinci.
tags: umfundiIndawo ekuyoyintoni amanqaku eklout
Meyi 11, 2011 kwi-7: 14 PM
Uqaqambileyo. I-Eyetrackshop iya kunceda iinkampani zivavanye ukupakishwa, iintengiso, amaphepha ewebhu njl.njl xa ngaphambili bezingenakho ukuzihlawulela. Impumelelo enkulu kuphando lwemarike.